Ingabe ikhona indlela elula yokuthola umnyombo wami uRay? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Ingabe ikhona indlela elula yokuthola umnyombo wami uRay?
Kungaba nzima kakhulu kothile ukuthola umnyombo wawo ray. Kunezizathu ezimbalwa zalokhu. Okokuqala, abantu abaningi bane- ukuduma kwemisebe ehlukene ezihlezi ngaphezulu kwe-ray yazo eyinhloko. Le misebe idinga ukusulwa, ngokudlulisa izifundo zayo, ngaphambi kokuba imisebe eyinhloko ibhekane nayo. Okwesibili, owomuntu ukuzazisa izama ukuvimbela ukuhlonza i-core ray. U-Ego ufuna ukuhlala ephila ngakho-ke, njengendlela yokusinda, izama ukuphika ukwamukela imisebe eyinhloko. Ngokwengeziwe, abantu banokuthambekela kokufuna ukuba yimisebe ethile ngoba bona uqobo lwabo banomuzwa wokuthi ukuba yiray eyodwa kuzwakala kangcono kunokunye. Yonke imisebe inikela empilweni ngezindlela ezahlukahlukene futhi iyingxenye ebalulekile yomthombo.
Uma othile esekude kakhulu endleleni yakhe engokomoya, ukuthola i-ray yabo eyinhloko kungasiza kakhulu ekuqhubekeni phambili. Kubo bonke abanye, qhubeka ngokuqapha. Abantu abathola imisebe yabo eyinhloko banomkhuba wokungayinaki i- izifundo kusuka kweminye imisebe. Lezi zifundo zibalulekile ukuzizwela nokuziphasa.
Uma umuntu ezimisele ukukhomba i-core ray, indlela elula ukuzihlola eyakhe kakhulu. Uma umuntu ebengabuka izinto abazithanda ngokweqile noma abazondayo, angathola i-core ray yabo. Lokhu kuyasebenza ngoba abantu bazizwa imizwa enamandla kakhulu kusuka emgodini wabo oyisisekelo futhi banesikhathi esinzima kakhulu ukwamukela bona.
- Uma othile ezonda izikhulumi ezikhuthazayo, kufanele babheke empandeni yalokhu. Kungenzeka babe ne-Orange Ray enkabeni yabo.
- Uma othile ezonda lapho abantu kufanele baye emsebenzini nsuku zonke, kufanele babheke umnyombo walokhu. Kungenzeka babe neBlue Ray enkabeni yabo.
- Uma umuntu ethanda ukufunda amaqiniso amasha futhi ezwa enesidingo sokufunda kabanzi, kufanele babheke umsuka walokhu. Kungenzeka babe ne-Purple Ray enkabeni yabo.
Ukubhekana nawe kungasabisa kepha kuyisinyathelo esidingekayo sokuziqonda ngokuphelele.
Sesha ngaphakathi ukuze uthole umnyombo wami
Umbala oyinhloko uhlala kimi
Ngithole ngivaleke womabili amehlo
i-core ray iveziwe
Amathegiukuqaphela ukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo izifundo ezingokomoya ingokomoya
Apreli 3, 2021 at 12: 50 pm